Nooc cusub oo coronavirus ah (Kovid-19) oo ka dhan ah tallaabooyinka faafa ee laga qaado baaxadda xaddidaadda, ayaa hoos u dhigay qiiqa maalin walba gaasaska uumi-baxa ah boqolkiiba 17,4 Turkiga. Marka loo eego macluumaadka laga helay Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalaynta, dhaqaalaha waddammada [More ...]
Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada ayaa go’aamisay tallaabooyinka laga qaadayo xarumaha dowladda iyo ururada iyadoo la soo afjaray hannaankii shaqada ee dabacsanaa dadweynaha, kaasoo billowday 19-kii Maarso sababo la xiriira daacuunka COVID-22. Caafimaadka Shaqada iyo [More ...]
Soo-nooleynta Gaadiidka Dadweynaha: Xaddidaadda 50 Rakaabka Rakaabka Rakaabka Waa Laga Saaray: Waajibaadka 'qaadashada boqolkiiba 50 awoodda' sababtuna tahay cudurka dillaaca coronavirus ayaa lagu daabacay wareegtada ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Daqiiqadii ugu dambeysay: Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shir-jaraa'id ku dhawaaqay in xiriirkii uu lalahaa Ururka Caafimaadka Adduunka, ee uu dhawaan ugu hanjabay warqad, in la joojiyay. Ka soo baxaa magaalada Wuhan ee Shiinaha, iyo dhammaan waqti gaaban [More ...]
"Covid-19 Nadaafadda, Ka Hortagga Cudurrada iyo Tilmaanta Xakamaynta" waxaa diyaariyay khubarada Machadka Istaandarada Turkiga (TSE), kaas oo hagitaan u noqon doona la dagaallanka shirkadaha ganacsiga wershadaha ee Covid-19. Hagahan ayaa bixiya nadaafad iyo [More ...]
Muwaadiniinta da'doodu tahay 65 iyo wixii ka weyn, ee laga xayiray inay baxaan muddo dheer, ugu yaraan mid laga bilaabo 21:09.00 Khamiista, XNUMX Meey, iyadoo la waafajinayo soo jeedinta Guddiga Sayniska iyo tilmaamaha Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. [More ...]
Mamnuucidda safarka ee magaalada gudaheeda waxaa sabab u ah fayras CoVID-19. Wareegto cusub ayaa la soo saaray shalay markii ay muwaadiniintu rabeen mamnuucista in sida ugu dhaqsaha badan loo joojiyo, waxaana la sheegay goorta xayiraada safarku ay dhamaan doonaan. [More ...]
Maalmo yar ayaa ka haray Ciidul Fitriga. Inta lagu jiro fasaxa, ayaa lagu soo bandhigayaa bandow 4-maalmood ah. Raashinka, suuqa, hiliblayaasha iyo kuwa wax lagu dubiyo miyaa furmi doona inta lagu guda jiro iidda? Gobollada ayaa daboolaya xayiraadda? Gudaha [More ...]